खलासी : हामीले बनाएको संरचनाको दोष असल मनोवृत्तिको विकास नभएका विद्यार्थीहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा यसरी नै आफ्नो परिचय दिएका नहोलान् भन्न सकिन्न । विचरा विद्यार्थीको के दोष ? जे सिक्छ, त्यही दिन्छ । त्यही देखाउँछ । १० फागुन, २०७७ 10 min read Share
अंग्रेजी भाषा आतंक : पिँजडाका प्रिन्सिपल र ब्रोकन अंग्रेजी भाषा जबर्जस्ती बोल्न लगाउनु सांस्कृतिक हिंसा हो । सांस्कृतिक अत्याचार हो । दमन हो । त्यसैले डियर प्रिन्सिपल हिंसा गर्न रोक्नुहोस् । प्रिन्सिपल हुनुभन्दा पहिला मानिस हुन सिक्नुहोस् २१ माघ, २०७७ 12 min read Share
अनि बोर्डिङ स्कुलप्रति मेरो मोहभङ्ग भयो मुलुकलाई चाहिने नागरिक उत्पादन नगर्ने शिक्षामा किन यत्रो लगानी गर्ने ? आरनआँगन, पाखोपखेरो बेचेर ३ घण्टे परीक्षाका लागि तयार बनाउने कि आरन आँगनमा सम्भावना देख्ने दृष्टि दिने ? बालबालिकालाई खास होइन, दास बन्न सिकाउने शैक्षिक व्यवस्थालाई अब बोक्न सकिन्न ९ माघ, २०७७ 11 min read Share